N'elu ise saịtị ibudata RAP songs na online
1 The Top ise Sites ka Download RAP Songs Online
The RAP music bụ isi mgwa nke a hip iwuli elu music Ọ bụ mgbe eji na oge nke gbagwojuru RAP music mbụ nwere kwuru uri. Mbido nke RAP music hụrụ n'oge hip iwuli elu ọtụtụ narị afọ, ọ bụ nnọọ ama music n'etiti ụmụaka na-eto eto. Ụfọdụ nke ama rapist dị bụ onye nyere hit songs bụ naa, akon na ọtụtụ ndị ọzọ a ma ama na-abụ abụ. The RAP music ga-weere na mba music inye a anọ na ya n'ezie na-eme ka song mara mma ma na reproduces ya na a ọhụrụ ụdị. The RAP music nwere ike nanị mere iji a olu na guitar; ọ bụ ihe magburu kwuru uri.
1.Mp3.com bụ a kasị mma na saịtị maka RAP music downloads ebe a na mbụ artists ga-bulite ọrụ ha na ofufe nke ndị nka nwere ike ibudata ya mfe. Saịtị agafewo search arụmọrụ nke na-enyere anyị aka idozi songs dabeere na nka na oge. Ndị mmadụ pụrụ categorize na music dị ka ha mmasị genre.
The mp3.com bụ ihe mbụ website nke esetịpụ songs nke nile nka ebe niile songs na-uploaded site n'otu artists. The website-enye ohere Fans ibudata ha mmasị artist si songs mfe, ndị mmadụ nwere ike ime ka eji nke elu search ebe a na udi, na genre na keabiidii search nwere ike mere nnọọ mfe. Anyị nwere ike seamlessly na-agagharị na songs na genre maara ihe na-eji oge a uche na-enyere aka ga-esi na songs mfe na ngwa ngwa.
2.Incompetecth bụ a kasị mma saịtị ibudata niile RAP music songs; ebe a anyị nwere ike ibudata free music maka featuring Youtube videos. Niile music bụ maka azụmahịa mkpa ndị mmadụ nwere ike ibudata ya na-eji ya na nke ọ bụla ha vidiyo ma ọ bụ n'ihu.
Incompetech bụ a eze website nke na-enye songs n'ihi na anyị na ị tube videos, na songs na-adịghị copywriter otú anyị nwere ike iji ya na anyị film, n'ihu na ihe ọ bụla azụmahịa videos. Saịtị bụ nnọọ aka nke ndị niile na-achọ songs n'ihi na ha oru ngo ma ikikere ego adịghị oké ọnụ otu. Saịtị bụ a kasị mma n'ihi na ọtụtụ budding film eso ndị na-enweghị ego. Ma, ndị mmadụ nwere ibudata na songs mgbe na-agụ ntuziaka nlezianya na website. Site Ịmara ha nile usoro na ọnọdụ anyị kwesịrị iji songs anyị oru ngo.
3.Madeloud.com bụ a ọrụ enyi na enyi na saịtị nke nwere songs uploaded kpọmkwem site na mbụ nka, ndị chọrọ na-akwado mmadụ ọ bụla artists nwere ike họrọ a na saịtị na ha nwekwara ike unen na music n'ihi na ha na-arụ.
Makeloud.com bụ a kasị mma saịtị ibudata anyị mmasị artist si songs saịtị nwere ihe karịrị-aj u nke songs nke bụ si dị iche iche edemede na Genres. Ndị mmadụ nwere ike ibudata song iji elu nchọgharị ụzọ na ọtụtụ ndị songs ugbu a na saịtị na-uploaded site ama artists. Ya mere ndị na-a dere ma na-achọ na-akwado nke ọ bụla n'ime ha mmasị nwere ike ime ka ojiji nke saịtị. The makeloud.com-enye ohere ọrụ Ikikere ha songs mfe mere na songs ga-adịghị na-eji onye ọ bụla n'ime.
4.Publicdomain4u.com nwere ihe magburu onwe n'ọbá akwụkwọ nke dum ọhụrụ songs nke na-dere ama egwú. Saịtị nwere Nchikota songs nke ẹmende na a akụkọ ihe mere eme n'ọnọdụ o nwere ọtụtụ curative songs nke ga-adọta mmasị kasị onye ọrụ ndị na-na ịga na website. N'ebe a, anyị nwere ike ịnụ ụtọ rekọd ama artists dị ka nnukwu Joe Williams na Cajun artists.
Publicdomain4u.com bụ a free saịtị nke nwere nnukwu n'ọbá akwụkwọ nke RAP songs saịtị nwere ebube E nke akụkọ ihe mere eme RAP music. Saịtị nwere agwakọta akụkọ ihe mere eme n'ọnọdụ songs na curative songs na-eme ka a anọ. Saịtị nwere nnọọ kacha nta menus nke aka ọrụ inyocha E nakwa ịmụta banyere ochie music-arọ dị ka nnukwu Joe Williams, Cajun, Joe na wdg saịtị bụ nnọọ ama nke ochie RAP songs na ọ bụ ọtụtụ gara mara banyere akụkọ ihe mere eme music nke America. Saịtị nwere ebube directorial search nke na-enye ọtụtụ songs for free.
5.Bumpfoot.com ẹkenam n'oge 2005 na-enye ohere ndị ibudata otu song ma ọ bụ ihe dum track, saịtị adịghị ihe ọ bụla ala ọkpụkpọ otú anyị mkpa na-ege ntị na song. The mixes nke songs pụrụ ịchọta bump200 ebe a dum ogbe ma ọ bụ solo songs nwere ike ibudata na otu abụọ. Ọ bụ a Japanese na saịtị nke na-enye ohere ka onye ọrụ cop, òkè ma kesaa songs dị ka kwa anyị chọrọ. Saịtị nwere nnukwu nchekwa data nke echekwa ihe karịrị-aj u nke songs na ya.
The bumpfoot.com nwere anọ nke songs nke bụ tumadi si Tekno teres, ambient, na naa na wdg saịtị na-adịghị a ọkpụkpọ maka ege ntị nke songs ma ndị mmadụ nwere ike ibudata ebube RAP video songs si website. The songs nwere ike ibudata dị ka otu mps faịlụ ma ọ bụ anyị nwere ike ibudata dum track si website. E nwere ọtụtụ ngwakọta songs ugbu a na bump200 Atiya a songs nwere ike ibudata na a solo n'ụdị ma ọ bụ dum ogbe nwere ike ibudata na oge. Ọ bụ a Japan na saịtị nke nwere ihe magburu onwe ndekọ nke songs na ọ bụ karịsịa n'ihi na ndị na-eche banyere Genres na udi. Saịtị-enye anyị ohere ịkọrọ anyị songs na ihe ọ bụla mmadụ ịkparịta ụka n'Ịntanet saịtị ma ọ bụ anyị nwere ike iṅomi ma kesaa songs na nke enyi anyị.
Niile n'elu saịtị nwere ma uru na ọghọm ndị mp3.com nwere nza video obere song ma video songs nnọọ ole na ole. Ma site na saịtị a ha nwere ike ibudata mbụ music uploaded site artists. Incompetech bụ nanị n'ihi na azụmahịa RAP music hụrụ na songs ike ga-eji nke ọ bụla n'ime ha oru ngo. Publicdomain4u.com bụ maka akụkọ ihe mere eme RAP songs, makeloud.com bụ maka mbụ artists songs na bumpfoot.com bụ maka niile iche songs anyị mkpa.
Best Way ka Download Music
2 Easy Ụzọ Download Music maka iPhone Free
Top 10 Online Music Ibé akwụkwọ Sites
Ihe niile ị na Mkpa Ịmata banyere 8tracks Radio
> Resource> Music> The Top ise Sites ka Download RAP Songs Online